Calm, nyarara uye unodziya town Siauliai riri kuchamhembe Lithuania. Maererano nevanhu ndicho chechina munyika. Guta Siauliai muna Lithuania makanga makore ane zana apfuura muna Vilnius, iye gore ekare kupfuura guta German - Berlin - uye chete gore muduku pane Tehran. Nhoroondo guta rine makore 770.
Guta Siauliai muna Lithuania ndiyo muzinda muruwa chete. From Vilnius zvinonzi akaparadzaniswa nevanhu 214 chete kubva kuKaunas - 142 km kubva Klaipeda - 161? Km. To guru nyika kubva Siauliai guta ingasvikwa nebhazi kana njanji.
Lithuania, Siauliai: okunze
Okunze muguta riri kuonekwa Transitional pakati nepagungwa uye Continental. It kunoratidzwa inotonhorera yechirimo pamwe kunonaya zhinji uye nekaupenyu nepakati muchando. Weather in Siauliai (Lithuania) hakusi kugara, uye windless zuva pano hariwanikwi chaizvo. Muna July, mhepo iri neshungu kuti +25 ° C, avhareji tembiricha yaJanuary - kwete pazasi -1 ° C.
Lithuania, Siauliai: zvinotyisa. Peter uye Paul Cathedral
Nyaya Cathedral of St. Peter uye St. Paul ane shanduro mbiri. Nokuti mumwe, yakanga yakavakwa nguva kubva 1617 ne 1637, maererano nomumwe - mumwe date: pakati 1594 uye 1625 makore. Iva zvingaita sezvakadaro, ichi chivako rekare nhasi yave rakaramba yaro yepakutanga chitarisiko, pasinei moto 1880, kuparadza zvikuru munguva yehondo pamwe Nazi Germany.
Cathedral munguva eSoviet akazodzorerwa kubva ipapo ndeimwe dzakakurumbira zvinokwezva. Zvimwewo machechi uye temberi Lithuania Cathedral kusiyaniswa pamberi Bay mahwindo, izvo zvinoratidza kuti chivako aivawo kuzvidzivirira basa.
Temberi ane nhengo yekare (XVIII remakore), uyo akatamira pano kubva kuchechi Holy Trinity (Kaunass). Uye semidesyatimetrovoy peshongwe Church, sezvo munguva dzekare, ratidza nguva chaiyo, chaishandiswa pasinei dzavo "akura" zera.
Migwagwa guta All zvakatungamirira tembere iyi; pano paKumuka yacho, kuenda nyanzvi dzokugadzira uye vatengesi vakaronga nhumbi ruzha uye pamisika. Uye nhasi, mumigwagwa pamberi Cathedral of vomuguta uye vashanyi kuronga misangano, vakabata mhemberero guta.
Muna 2000, mukati Lithuanian muguta Franciscan yemamongi yakavakwa. Chitarisiko chake chakaita akatanga Pope Paul II. Nokuti yokuvakira akasarudzwa pedyo Cross Mountain.
Tichidzokera kumba pashure kushanyira Lithuania, Papa vakazivisa mamongi ari Franciscan wemamongi, riri paGomo La Verna (Italy), vakashanyira Hill Michinjikwa. chisarudzo chakaitwa pamusoro penheyo yemamongi Lithuania pakupera kushanya. Muna 1997 zvakanzi anotenderwa uye akakomborerwa muenzaniso yemberi kuvakwa ibwe rokutanga rokuvaka nheyo dzateyiwa muna 1998.
Yemamongi kuvaka chakagadzirwa tsvuku chidhinha, denga rayo korona pamuchinjikwa. Muchivanze unogona kuona chivezwa ane vachinyengetera mumongi uye mifananidzo munoshongedza menyika. Nhasi, ari wemamongi, vose vanogona kutenga muchinjikwa pectoral, uutsaure.
The Hill Michinjikwa
Chimwe chezvinhu kujairika zvinotyisa muguta Siauliai muna Lithuania. Izvi yomukatikati omunharaunda uye nzvimbo outorwa. Riri gumi makiromita kuchamhembe kweguta uye iri diki chikomo akafukidzwa michinjikwa ravira. Maererano ine vanofungidzira nhamba yavo kwazvo zviuru makumi mashanu.
The zvinokonzera ichi dzomumaguta zvinokwezva haizivikanwi. Vanotsvakurudza vanoomerwa zita uye musi rwayo muguta; vamwe kuna 1831 anokukonzera, vamwe vanodavira kuti akazviratidza ipapa. Maererano nezvinodavirwa nevakawanda, mumwe akaisa pamuchinjikwa mugomo vachafara, uye haazombofi kutsauka rombo rakanaka.
Michinjikwa kuisa zvakasiyana chaizvo - hombe, vanoverengeka metres yakakwirira, uye kurovererwa zvavo pectoral muchinjikwa, akachera muvhu. Mumwe pamuchinjikwa pano uye akawana Paul II pakushanya kwake kunyika. chiitiko ichi aiva rudaviro kukuru, uye vakamhanyira pagomo akawandisa vashanyi.
Muzana remakore rechimakumi maviri, vakuru vakuru veSoviet akaedza kanoverengeka kuparadza pagomo, asi pakarepo pashure rakatevera nokutorera zvikatapira kuroverwa chikomo chakamukazve chava Sangano iri panzvimbo.
Chime mumigwagwa Vilniaus
Kufanana maguta akawanda ano, Siauliai muna Lithuania ane chime mumugwagwa, asi kwete vose vanoziva kuti muguta iyi yakaonekwa pakutanga muna USSR. Its kureba anenge mashanu makiromita, uye chikamu chime mumigwagwa Vilniaus iri pakati mumugwagwa uye nzira Zhyamaytes Draugistes. Vagari vanodana chikamu ichi Šiauliai Boulevard.
Muna 1975, motokari yakamiswa panzvimbo ino zvachose. Nhasi, kune vazhinji unodziya cafes uye maresitorendi, zvitoro uye unyanzvi nemavharanda. It zvakare dzakagara imwe mamiziyamu mashoma .. Bikes, mapikicha, etc. Mugwagwa wacho yakashongedzwa vakawanda tsime uye zvivezwa. Pakutanga mashoko XXI remakore chime mumugwagwa zvazova tourist peguta. Imba nhamba 213 zvino tourist ruzivo centre iri.
Museum of Radio uye Terevhizheni
Siauliai muna Lithuania, pikicha izvo unogona kuona munyaya ino - guta iro Nyatsobatanidzwai rinobatanidza nezvivakwa kare uye dzimba ano. Zvinonzi yakavakwa chete mhanya, hapana mubvunzo anowedzera rinokosha norunako nayo.
Paley Center nokuti Media akaonekwa guta rino harisi netsaona. Maiva muna Siauliai muna 1925 pakanga nyika rokutanga redhiyo murabhoritari. Rakavakwa Stasys Braziskis, uyo akaunganidzawo wokutanga Lithuanian TV uye redhiyo. Panguva chirongwa yekwataigara redhiyo mainjiniya muna Siauliai akazviratidza Museum (1982), iro akazvitsaurira zvakakwana kuti kukura redhiyo uye terevhizheni.
"Ausra" Nhasi uri chikamu unyanzvi chirongwa. Heano maredhiyo vemazera akasiyana uye kubva kunyika dzakasiyana, materevhizheni, akwegura zvemaziso mano yaishandiswa ekuteerera playback. The miziyamu adjoin midziyo kombiyuta uye gramophones, uyewo mamwe anonakidza midziyo yakawanda.
Museum mudonzvo pave tsika dzayo. Saka, kubva 1995, ndakaiswa ose gore makwikwi pakati vaduku redhiyo amateurs kuti zvakanakisisa kuvamba. Vadzidzi vanogona kuteerera hurukuro nezvenhoroondo redhiyo, enzanisa kuitika Hardware yokutanga namano.
Villa Haima Frenkelya
A zvikuru mapurani Monument pakati pakutanga XX remakore zvinosanganisira anenge ose Tours akapoteredza guta Siauliai muna Lithuania. Chivako yakavakwa muna 1908 Art Nouveau werudzii kuti tenzi nedehwe H. Fraenkel fekitari. makore okutanga ndivo mhuri muridzi vaigara, uye ari maviri remakore rapfuura dzakagara chikoro Jewish, uyo akashanda kwemakore anenge maviri.
Munguva yeHondo Yenyika II nayo dzichengeterwe chipatara wokuGermany, uye yangopedzwa - muchipatara Soviet. Kubvira muna 1994, chivako ichi miziyamu, apo unogona kuona kuratidzira maviri. Muna 2003, kuti kwamagwaro "Provincial kuchamuka" akasikwa, yakatsaurirwa kuna dzematunhu upenyu pakutanga kwezana XIX-XX emakore. In chikamu miziyamu wechipiri pane magwaro uye Exhibits kusimbisa tsika nhaka vechiJudha vanhu Siauliai.
The kunzwisisa ine pakuratidza dzimba nhatu, mbiri mhenyu makamuri uye raibhurari. The Villa iri peya mapurani sezvamunoita: kunzwa kuti inoitwa mudzimba mbiri dzakafanana. On mukati Villa unogona kufamba yakaisvonaka paki uye kuyemura Chitubu ane dziva.
The plesieroorde muArmenia - yokukosha runako uye European basa
Things kuita pazororo muguta?
Krasnodar Reservoir zvinotivaraidza, hove uye nhoroondo kuvakwa
Serebryanskoye Dam (Murmansk dunhu) - description, features, mapikicha
Raven - Apartment muMoscow
Mukusarudza Resorts pamusoro Belarus. Gomel nharaunda
Manheru anozvigadzirira zvisinganzwisisiki, rudo rwekusangana
Sei vakwanise autoplay - Tips uye Secrets
Kazan Regional College Mutsika (GKOU ITA UCS): Address dzakagadzirirwa, chionekeso
Zvokudya zveAssetian: pies mapeji
Day mudzidzisi: yezororo chiitiko kukireshi
Brands shangu. Inodhura uye kwete chaizvo
Wokutanga Nyika vemifananidzo. vanoita
Greece, Paralia Katerini: wongororo, rondedzero, zvinhu uye zvinokwezva
Sports mari kubva sport-invest.biz senzira kuwedzera yenyu guru
Hazelnut (filbert): kudyara uye kutarisirwa. Hazel krasnolistnyh